Ciidamada Mali iyo Kuwa France Oo Galay Magaalada Diabaly
Home Somali News Ciidamada Mali iyo Kuwa France Oo Galay Magaalada Diabaly
Ciidamada Faransiiska iyo kuwa Mali ayaa saakay waqti hore waxay gudaha u galeen magaalada Diabaly oo ay xukumayeen jabhada Islaamiga ah ee Ansaarudiin.
Magaaladaan oo ku taala galbeedka wadanka Mali, ayaa isbuucyadii ugu danbeeyay waxay hoy u ahayd duqeymaha diyaaradaha Faransiiska.
Ilo ka tirsan ciidamada Mali ayaa wakaalada wararka AFP usheegay in cutubyo katirsan Ciiamada Mali iyo kuwa Faransiiska ay saakay kasoo dhaqaaqeen Niono oo 60km dhanka koofureed kaga began magaalada Diabaly.
Sarkaal katirsan ciiamada Mali ayaa uga digay ciidamada gudaha ugalay diabaly in ay ka digtoonaaaan dadka kunool magaaladaas oo la falgalay dagalyahanada horay u haystay halkaas.
Masuuliyiin katirsan doowlada ayaa sheegay in dagaalyahanada Ansaarudiin ay jimcihii isaga baxeen Diabaly laakiin Ciianku ay ka baqayeen ineey wali ku dhuumanayaan gudaha, taasoo arinta ka yeeleyso mi adag.
Wasiirka difaaca Faransiiska Jean-Yves Le Drian, ayaa qiray in Ciidamadooda aysan wali si buuxa ula waregin gacan ku haynta diabaly, laakiin waxa uu sheegay in saacadaha soo aadan ay la wareegi doonaan.
Ciidamada Cirka Faransiiska ayaa isbuucii lasoo dhaafay duqeymo ku bilaabay magaalada diabaly, oo ay Ansaarudiin qabsadeen 14 january 2012-ka, waxaana hadda faransiiska wadanka Mali kaga sugan Ciidamo gaaraya 2,000 kuwaasoo dagaal kulajira jabhadahada Islaamiga ah ee halkaas maamula.